“Wubetu Kɔbere Afi Ne Mmepɔw Mu” (Deuteronomium 8:9)
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Pangasinan Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Bere bi, na nnipa a wotutu fam hwehwɛ tetefo nneɛma mu reduedue mmɔnka ne abodan mu wɔ Yudea kwayow so na wokohuu ɔbodan bi wɔ bepɔw tenten bi so. Dɛn na na wobenya wɔ hɔ? Tetefo anwenne bi anaa? Anaasɛ na wobetumi anya nsa ano nkyerɛwee bi te sɛ Po a Awu Nhoma Mmobɔwee no? Wokohuu biribi a wɔn ani nna; wohuu akorade bi a ɛsom bo, na wɔfrɛɛ no Nahal Mishmar akorade.
MARCH 1961 mu na wohuu saa akorade no, na na wɔde mmerɛkɛtɛ akyekyere ho asie abo bi ntam. Nneɛma bɛboro 400 na na ɛwom; emu dodow no ara nso, na wɔde kɔbere na ayɛ. Ebi yɛ ahemmotiri, ahempoma, nnwinnade, aporibaa, ne akode afoforo. Yɛhwɛ asɛm a ɛwɔ Genesis 4:22 no a, ɛma yehu sɛ akorade a wokohui no ho hia wɔn a wɔtaa kenkan Bible no paa. Ɛka Tubal-Kain ho asɛm sɛ “na ɔyɛ ɔtomfo a ɔde kɔbere ne nnade yɛ nneɛma.”
Obiara ntumi nkyerɛ baabi a akorade no fi ne nea ɛyɛe a ebepuee hɔ. Nanso saa akorade no a wɔahu no ma yehu sɛ tete aman a Bible ka ho asɛm no, na wotu kɔbere wɔ hɔ, na na wɔnan de yɛ nneɛma; efii ase akyɛ paa.
MMEAE A NA WOTU KƆBERE WƆ BƆHYƐ ASASE NO SO
Bere a aka kakra ama Israelfo adu Bɔhyɛ Asase no so no, Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Asase no so abo yɛ dade na wubetu kɔbere afi ne mmepɔw mu.” (Deuteronomium 8:7-9) Nnipa a wotutu fam hwehwɛ tetefo nneɛma mu ahu mmeae pii wɔ Israel ne Yordan a na wotu kɔbere yɛ ho adwuma; wohuu bi wɔ Feinan, Timna, ne Khirbat en-Nahas. Dɛn na wɔhyɛɛ no nsow?
Wokɔ Feinan ne Timna na wohwɛ asase no a, wubehu sɛ amoa bebree wowɔ hɔ. Anyɛ hwee koraa no, wɔde mfe 2,000 tuu kɔbere wɔ hɔ. Ɛnnɛ mpo, sɛ obi kɔ hɔ a, obehu abo a apaapae gu hɔ a kɔbere hyehyɛ mu. Tete no, na wɔn a wotu kɔbere no yɛ adwumaden waawae abotan so araa kosi sɛ kɔbere a ɛwom no bɛba abɛtɛ hɔ ama wɔayiyi. Sɛ kɔbere a ɛtetɛ hɔ no sa a, wɔde nnade tu abotan no mu kɔ akyiri yiyi mu twitwa amoa akɛse toto mu. Sɛ yɛkan Hiob nhoma a ɛwɔ Bible mu no a, yehu ɔkwan a tetefo no faa so tuu fagude yi. (Hiob 28:2-11) Ná ɛyɛ adwumaden paa. Enti bɛboro mfe 1,600 mpo ni no, sɛ Roma atumfoɔ de amammɔfo mu amammɔfo paa no kogu afiase a, na wɔma wɔne nneduafo foforo kɔyɛ adwuma wɔ baabi a wotu kɔbere wɔ Feinan.
Khirbat en-Nahas yɛ kurow a ne din kyerɛ “Kɔbere Ase.” Sɛ wokɔ hɔ a, wubehu kɔbere ase sɛ esum hɔ bebree, na ɛno ma yehu sɛ bere bi, na wotu kɔbere pii wɔ hɔ. Abenfo kyerɛ sɛ na wɔde abo a wonya kɔbere wom no fi mmeae bi te sɛ Feinan ne Timna na ɛba hɔ. Ɔkwan a na wɔfa so yiyi kɔbere fi abo no mu ne sɛ, wɔsɔ gya na wɔde afa fita mu ma ɛyɛ hyew paa (bɛyɛ Celsius 1,200) ma ogya no si so bɛyɛ nnɔnhwerew awotwe kosi du. Sɛ wɔfa abo kilogram 5 a, kɔbere kilogram 1 na na wonya fi mu; kɔbere a wonya fii mu no, na wotumi de yɛ nneɛma bebree.
NNEƐMA A TETE ISRAELFO DE KƆBERE YƐE
Yehowa Nyankopɔn hyɛɛ da kae wɔ Bepɔw Sinai so sɛ, wɔmfa kɔbere kamakama a wotu wɔ mpɔtam hɔ no bi nyɛ ntamadan no ho adwuma, na asɔrefie a akyiri yi wosii wɔ Yerusalem no nso, ebi na wɔde yɛɛ ho adwuma. (Exodus, ti 27) Ebetumi aba sɛ na Israelfo no nim kɔbere ho adwuma kakra ansa na wɔrekɔ Egypt, na ebetumi nso aba sɛ wosuae wɔ hɔ. Ne nyinaa mu no, bere a wofii hɔ no, wotumi de bi yɛɛ nantwi ba. Wotumi nso de bi yɛɛ kɔbere nneɛma a wɔde yɛɛ ɔsom adwuma wɔ ntamadan no mu no; ebi ne asɛn, nkuku, nkankyee, sofi, ne adinam.—Exodus 32:4.
Akyiri yi a wɔnam sare so no, wokoduu baabi a ɛbɛn Punon (ɛbɛyɛ sɛ ɛhɔ na ɛnnɛ wɔfrɛ no Feinan no). Ná kɔbere wɔ mpɔtam hɔ paa, na ɛhɔ ara nso na ɔman no nwiinwii wɔ manna ne nsu ho no. Anwiinwii no nti, Yehowa somaa awɔ a wɔn ano wɔ bɔre bɛkekaa wɔn de twee wɔn aso; wɔn mu bebree wuwui. Israelfo no nuu wɔn ho, enti Mose srɛ maa wɔn, na Yehowa ka kyerɛɛ no sɛ ɔmfa kɔbere nyɛ ɔwɔ sɛso mfa no nsɛn dua tenten bi so. Bible ka sɛ: “Afei sɛ ɔwɔ ka obi na ɔhwɛ ɔwɔ a wɔde kɔbere ayɛ a ɛsɛn dua so no a, na wanya nkwa.”—Numeri 21:4-10; 33:43.
ƆHENE SOLOMON KƆBERE
Asɔrefie a na ɛwɔ Yerusalem no, kɔbere na wɔde yɛɛ ɛho nneɛma pii
Ɔhene Solomon de kɔbere pii siesiee Yerusalem asɔrefie hɔ. Kɔbere no bebree wɔ hɔ a ne papa Dawid na ɔde gyaw no; bere a Dawid dii Siria so nkonim no na ɔfaa kɔbere no. (1 Beresosɛm 18:6-8) Ná “ɛpo a wɔagu” no yɛ sɛn kɛse a wɔde kɔbere ayɛ, na ɛno mu nsu na asɔfo no de hohoroo wɔn ho; ná ɛfa nsu bɛboro lita 66,000, na ɛbɛyɛ sɛ na emu duru bɛyɛ tɔn 30. (1 Ahene 7:23-26, 44-46) Afei ɔyɛɛ kɔbere adum akɛse abien wɔ asɔrefie no anim; ebiara tenten yɛ mita 8, na na ebiara wɔ ntaaso a ne tenten yɛ mita 2.2. Ná tokuro da adum no biara mu na ne pipiripi yɛ sɛntimita 7.5, ɛnna ne tɛtrɛtɛ nso yɛ mita 1.7. (1 Ahene 7:15, 16; 2 Beresosɛm 4:17) Yetumi hu sɛ na wobehia kɔbere bebree na wɔatumi ayɛ saa nneɛma yi nyinaa.
Nnipa a wɔtenaa ase Bible mmere mu no, na wɔtaa de kɔbere yɛ nneɛma pii. Sɛ yɛkan Bible a, ɛka nneɛma pii a wɔde kɔbere ayɛ ho asɛm; ebi yɛ akode, nkɔnsɔnkɔnsɔn, nnwonto nneɛma, ne apon. (1 Samuel 17:5, 6; 2 Ahene 25:7; 1 Beresosɛm 15:19; Dwom 107:16) Yesu kaa asɛm bi a ɛkyerɛ sɛ na nkurɔfo tumi de “kɔbere” sika hyɛ wɔn abɔso mu. Ɔsomafo Paulo nso kaa obi ho asɛm sɛ: “Aleksandro a ɔyɛ kɔbere dwumfo no.”—Mateo 10:9; 2 Timoteo 4:14.
Nahal Mishmar akorade no a wɔakohu ne afei sɛnea na kɔbere nneɛma abu so wɔ Bible mmere mu no, abakɔsɛm akyerɛwfo ne wɔn a wotutu fam hwehwɛ tetefo nneɛma mu ntumi nte ase nwie. Nanso yebetumi aka no pen sɛ sɛnea Bible si so dua no, asase a Israelfo kɔfa tenaa so no, ampa ara na ɛyɛ ‘asase pa a wobetu kɔbere afi ne mmepɔw mu.’—Deuteronomium 8:7-9.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN December 2013 | Yehia Onyankopɔn Wɔ Yɛn Abrabɔ Mu Anaa?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN December 2013 | Yehia Onyankopɔn Wɔ Yɛn Abrabɔ Mu Anaa?